Wararka - Marka lagu daro xaaladda ay hadda ku sugan yihiin shirkadaha, waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabo tallaabo iyo si firfircoon
Marka lagu daro xaalada ay hada ku sugan yihiin shirkadaha, waa inaan u qabanaa talaabo talaabo iyo si firfircoon
Bishii Abriil 16, dharka Pinyang wuxuu helay amar ah 3000 qaybood, oo si guul leh loo gaarsiiyey 29th. Tirada qeybtaan amarada ah aad ayey uyartahay, waxayna ubaahantahay todobo midab. Waxay qaadataa 12 saacadood hal midab inuu dheeho iyo saddex maalmood toddobada midab. Waxay sidoo kale u baahan tahay in la dhammaystiro habab kala duwan sida tolnimada iyo daabacaadda. Ugu dambeyntiina, waxaa lagu geyn karaa 13 maalmood, taas oo ka tarjumeysa dabacsanaanta iyo deg-degga wax soo saarka shirkadda.
Isbadal la’aan dhanka ganacsiga ah iyo fikirka internetka, waxyaabahan lama qaban karo. Fikirka internetka wuxuu ubaahanyahay wadashaqeyn si loo hirgaliyo fikirka gaarsiinta 7-maalmood ee hanaan kasta. Wareeg yar oo xiran ayaa sameeya wareeg weyn oo xiran, kaas oo ku dhex jira wax soo saarka jilicsan. Waxsoosaarka jilicsan, sida gabal bur ah, waa la dufan karaa iyadoo aan loo eegin sida dalabku u ballaaran yahay.
Dabacsanaanta kuma koobna kaliya fikradda isbeddelka habka wax soo saarka, laakiin sidoo kale fikradda maareynta ganacsiga. 70% shaqada ka socota shirkadaha dharka sameeya waa inay ahaadaan wax guntin, shaqaaluhuna waa inay diyaar u yihiin inay sameeyaan amarro waaweyn. Sidaa darteed, waxsoosaarka jilicsan wuxuu leeyahay shuruud aad u sareysa oo ku saabsan maareynta waana in loo diyaar garoobaa talaabo talaabo waqti gaaban ah. Soosaarka dharka wali waa warshad xoog ku shaqeeysa. Tusaale ahaan, qalabka quudinta otomaatigga ah ee aqoon-isweydaarsiga dye wuxuu hagaajiyaa habka saxda ah iyo tayada wax soo saarka. Si kastaba ha noqotee, xiriiriyeyaasha wax soo saarka qaarkood, suurtagal maaha in gebi ahaanba la baabi'iyo foosha. Waa lama huraan waana lagama maarmaan in Internet-ka warshadaha uu horumariyo ilaa maanta. Si kastaba ha noqotee, sababo la xiriira warshado kala duwan iyo heerar kala duwan oo soo galitaan, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro xaaladda hadda jirta ee shirkadaha si ay u sameeyaan tallaabo tallaabo iyo firfircoon.